भित्री बस्त्र.. भेटियो प्र’मा’ण, श्रीमतिको कपडा ज’ला’इ’दि’ए करोडपति थिए रोडमा पुर्याई (भिडियो सहित) – Dainik Samchar
भित्री बस्त्र.. भेटियो प्र’मा’ण, श्रीमतिको कपडा ज’ला’इ’दि’ए करोडपति थिए रोडमा पुर्याई (भिडियो सहित)
March 23, 2021 172
हिजोआज हाम्रो समाज दयामायालाई पर राख्दै क ठो र हुँदै गई रहेको छ । खासगरी घरमा भएका बृद्ध बा आमालाई पाल्ने र उनीहरुको स्याहार सुसार गर्ने विषयमा । बृद्ध भएका बा आमालाई पाल्नु पर्छ भनेर प्रायले आफ्नै जन्म दिने बा आमालाई घरबाट पर बृद्धाश्रममा राखेका समाचारहरु जत्तिपनि सुन्न पाईन्छ । कतिले बृद्धाश्रममा राख्छन् त कतिले बेवारिसे छाडिदिन्छन् । यस्तै एउटा घ ट ना घ टे को छ काठमाडौको जोरपाटीमा ।
जहाँ सय वर्ष उमेर पुगेका सासुससुरालाई पाल्न पर्छ भनेर बुहारीले आफ्नै छोरा (श्रीमान) लाई समेत छाडेर फ रा र भएकी छिन् । करिब करिब २७ लाखको हाराहारीमा पर्ने उत घर बेचेर सबै श्री सम्पती लिएर फ रा र भएको दान बहादुर कुँवरकी श्रीमती अर्थात सासुले बताएकी छिन । केही दिन यता घरमा पनि छोरा बुहारीको राम्रो मेलमिलाप नभएको र दिनदिनै झगडा भईरहेको कुरा पनि सासुले खुलाएकी थिइन् ।
छोरा बिदेशमा हुदाबाटनै सासु र ससुरालाई निकाल भन्दै दबाब दिएकी बुहारी अचानक गायब भएपछि अहिले परिबार चिन्तामा छन । र सासुससुराले खोज्न हरकोहीलाई गुहारेको पनि बताएका थिए । जती गरेनी र खोजेपछि पनि सिप नलागेपछि मिडियामा आएको बताउछन यि दम्पती । यो उमेरमा पनि हामीलाई किन यसरी बिचल्ली पारि बुहारीले सोध्न मन लागेको छ भन्दै आमा रोइ रहेकी थिइन् । त्यसको लगत्तै बृद्दा जोडीका छोरा मिडियामा आएका थिए। भिडियो हेर्नुहोस।
Prevएक हप्ताका लागि सरकारी/गैरसरकारी संस्था, विद्यालय, पसल सबै बन्द हुने ! भर्खरै आयो यस्तो खबर !
Nextयुवतीकाे मृ’त्यु भएपछी लम्कीचुहा, स्थिती त’नावग्रस्त : प्रहरीको गाे’ली लागेर दुई जना घा’इते !
पढाइसँगै च्याउखेतीमा विद्यार्थी
अधुरै रहयो श्रीमानलाई भेट्ने धोको, अ’पराधीहरुको हातबाट मा’रिइन् उर्मिला
अब खाना पकाउने ग्यास ११२० रुपैयाँमै पाइने!